बिश्व Archives - Page4of 13 - बिगुल न्यूज
चाइल्ड पोर्नोग्राफीको दोषी हलिउड अभिनेता मार्क सेलिंगले गरे आत्महत्या
हलिउड अभिनेता मार्क सेलिंगले गत मंगलबार राति झुण्डिएर आत्महत्या गरेका छन् । उनी ३५ वर्षका थिए र डिसेम्बर २०१७ मा चाइल्ड पोर्नोग्राफीमा दोषी पाएका थिए । यस वर्ष मार्चमा उनलाई सजाय …
मृत्यु भन्दा पहिले के देखिन्छ ? मृत्युको सबैभन्दा ठूलो रहस्य !
माघ १७, २०७४ DPN G
काठमाडौँ:- अक्सर मान्छे भन्छन् कि जीवनको सबैभन्दा ठूलो सत्य मृत्यु हो। यदि हो भने त्यसपछि त्यहाँ के छ ? स्वर्ग र नर्क के हो ? एक व्यक्तिले कसरी मोक्ष पाउछ र …
इच्छाशक्ति भए देशमै केहि गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा गतिलो उदाहरण बनेका “सुमन’
माघ १७, २०७४ DB - Bigul Media
सिटन पुरी सपनाको शहर काठमाडौँमा मानिसहरु विभिन्न सपनाहरु सजाएर भित्रने गर्छन्। कयौं बिद्यार्थी राम्रो जागिरसँगै पढाई पनि गर्ने उदेश्य लिएर राजधानी काठमाडौँ पस्छन् , कोहि व्यवसाय गर्ने सोचले आउछन् भने कोहि …
माघ १७, २०७४ Madhu Sudan
काठमाडौँ:- बलिउडको चर्चित निर्देशक राम गोपाल वर्माले हालै चलचित्र GOD, SEX AND TRUTH लाई लिएर निकै चर्चा बटुलेका छन् । यस चलचित्र मार्फत उनले यस्तो ठाउँमा हात हालेका छन् जुन एकदम …
कमालको बिरालो, आफैले लिन्छ जबरजस्त सेल्फी
काठमाडौँ:- यी दिनहरुमा एक बिरालोको सेल्फी सोसल मिडियामा भाइरल भईरहेको छ। उक्त बिरालो सेल्फी खिच्न यति माहिर छ कि मानिसहरु उसलाई सेल्फी क्याट नामले बोलाउने गर्दछन। हास्यास्पद कुरा भनेको यो …
शहीद दिवसका अवसरमा नेविसंघको रक्तदान
माघ १६, २०७४ DB - Bigul Media
नेपाल विद्यार्थी संघले शहीद दिवसको अवसर पारेर रक्तदान कार्यक्रम गरेको छ । आज विश्वभाषा क्याम्पसमा आयोजित उक्त कार्यक्रममा ५० जनाले रक्तदान गरेका थिए । उक्त कार्यक्रम शुभारम्भ गर्दै नेपाली काँग्रेसका …
एजेन्सी । उडान भर्ने क्रममा जहाजको इन्जिन फेल भएपछी पाईलटले सडकमै आपतकालीन ल्याण्डिंग गरेका छन्। अमेरिकाको क्यालिफोर्नियामा उड्न लागेको हवाइजहाजको एक्कासी इन्जिनमा खरावी आएपछि पाईलतले राजमार्गमामै ल्याण्डिंग गरेका हुन् । तर, यात्रा घटना हुँदा पनि …
भोलिबाट स्वस्थानी व्रत समाप्त, यी १२ तस्विरमा हेर्नुहोस सालिनदी मेलाका केहि झलकहरु!
माघ १६, २०७४ SG BigulMedia
काठमाडौँ, पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि माघ शुक्ल पूर्णिमासम्म विधिपूर्वक गरिने स्वस्थानी व्रत भोलि देखि समाप्त हुने छ । पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि माघ शुक्ल पूर्णिमासम्म एक महिना स्वस्थानी व्रत र माघ स्नान गरिन्छ । …
२० वर्षीय यी एक्ट्रेसले आफ्नो हुने वाला बच्चाको लागि बनाईन १५ करोडको घर
माघ १६, २०७४ Madhu Sudan
एजेन्सी, रियालिटी टिभी स्टार कायली जेनर अब छिटै नै आमा बन्ने भएकी छिन् । यो खुशीको खबर कायली आफै र उनको प्रेमी ट्रैविस स्काटले दिएका थिए । अब २० वर्षकी …
अब यस्तो चलचित्रमा काम नगर्ने, दिपिकाले खाईन कसम
बलिउडकी क्वीन बनिसकेकी नायिका दीपिका पादुकोण यी दिनहरुमा आफ्नो चलचित्र “पद्मावत” को लागि हाल चर्चाको बिषयमा रहेकी छिन् । चलचित्रको कमाई भने ४ दिनमा १०० करोड नाघिसकेको छ । यसको अलावा …